भा’रतीय गृ’हमन्त्रीको यस्तो घो’षणा : अव नेपालीले भारतमा ब’स्न न’पाउने !::Point Nepal
भा’रतीय गृ’हमन्त्रीको यस्तो घो’षणा : अव नेपालीले भारतमा ब’स्न न’पाउने !
न् । उनले अब छिट्टै यो नियम लागू गरिने जानकारी दिएका छन् । उनले सबै अवैध आप्रवासीहरुलाई देशबाट बाहिर निकालिने चे’तावनी दिइसकेका छन् ।
आसाममा हालै यस्तो व्यवस्था लागु गर्ने सन्दर्भमा नागरिकहरु छुटेको भन्दै विवाद भएको थियो । शाहले पनि एनआरसी लागु गर्नेबारे जोड दिएका हुन् । बंगलादेश, पाकिस्तान लगायत मुलुकबाट भारत आइ अ’वैध रुपमा बसोबास गर्नेहरुलाई लक्षित गरी यहाँ आप्र’वासीमाथि क’डाइ गर्न थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ । शाहको यस्तो घो’षणाले भारतमा ब’स्दैआएका नेपालसहित छिमेकी मुलुकका नागरिकलाई अप्ठ्यारो पर्ने आशंका गरिएको छ । खासगरी लामो समयदेखि भारतमा बस्दै काम गर्दै आएका तथा व्यवसाय गर्दैआएका छिमेकी मुलुकका नागरिकलाई यस्तो नियमले क’डाइ गर्नसक्ने टिप्पणी हुने गरेको छ। एजेन्सी”